Maldiva: Fanakatonan’ny Blaogin’ireo Mpanohitra Sy Mpanenjika Silamo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2018 1:48 GMT
Milaza ny blaogy Maldives Dissent fa [amin'ny teny anglisy, toy ireo blaogy voatanisa rehetra] :
Herinandro taorian'ireo fanambaràna nataon'ny filoham-pirenena Anni, izay mikasa ny hanao an'i Maldiva ho fasan'ireo mpanoratra voan'ny tsindry hazo lena, nosakanan'ny governemantany ny vohikalan'ny mpanohitra. Nosakanan'ny Tomponandraikitry ny Serasera ny vohikala raajjeislam.com noho ny baikon'ny Ministeran'ny Raharaha Silamo. […] Nosakanana ny vohikala ny marainan'ny namoahana ny rakipeo nataon'i Imam de Foakaidhoo, M. Mohamed Shakeeb, izay niampangany fa nandrahoana azy ny Minisitry ny Raharaha Silamo.
Tao anaty lahatsoratra iray hafa, mitatitra ny Maldives Dissent fa:
Mitombo ny lisitr'ireo vohikala voararan'ny governemanta an'ny Filoham-pirenena Anni, eo ambany fibaikoan'ny Ministeran'ny Raharaha Silamo. Araka ny voalazan'ny Haveeru, valo ankehitriny ireo vohikala nakatona noho ny fiampangana fa namoaka an'ireo vontoatin'ny fanoherana silamo sy mpiaro ny kristianina amin'ny teny dhivehi, fiteny ao Maldiva.
Volana maromaro lasa izay, navoaka ireo tatitra izay nilaza hoe ny Ministeran'ny Raharaha Silamo no nikarakara ny fanakanana an'ireo vohikala rehetra manindrahindra ny kristianisma ao Maldiva.
Mamoaka ny lisitr'ireo vohikala nakatona ny Jawish Hameedpublie ary manome an'ireo antony mety nahatoga an'io fandraràna io:
Blaogera maldiviana marobe toa an'i Al Mode no niharan'io fanakatonana io. Namoaka fijery iray an'ireo fidiran'ny mpampiasa Tweeter ao Maldiva ny blaogy Breaking Tweets, tamin'ny fanamarihana ny fanoheran'ireo vahoaka ao Maldiva:
@sofwath (Malé, Maldives) : tsy nanova olona ianao satrianoterenao hangina izy.
Mihevitra i Ali Naafix fa misy antony ara-politika ao ambadik'io fanakatonana io:
Manao izay danin'ny kibony ny Minisiteran'ny Raharaha Silamo, ambany fifehezan'ny antoko mpanohitra Adhaalath (Ny Antokon'ny Rariny):
Manana ity hafatra ity ho an'ny governemanta ny Maldives Dissent:
Tantaran'ny Maldiva farany
11 Jolay 2018Azia Atsimo
Nibedy an'i Maldiva ireo mpanara-maso ny fahalalahan'ny gazety
04 Avrily 2018Azia Atsimo
15 Desambra 2017Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Ny Show Global Voices Fahadimy